Jooji dagaalka Suuriya! Dybala & Totti oo hoggaaminaya Olole lagu diiddanyahay duqeymaha US
Thursday, January 24th, 2019 - 13:46:49
Monday April 10, 2017 - 08:09:47 in Wararka by Muuse Cabdi
Juventus laacibkeeda Paulo Dybala ayaa kula biiray halyeyga kooxda Roma Francesco Totti Olole dhanka nabadda ah oo Mareykanka loogu baaqayo in uu joojiyo madaafiicda uu ku garaacayo Syria.
Jimcihii, Mareykanka ayaa duqeymo cirka ah ka billaabay Suuriya, iyaduu diyaaradihiisu kasoo duulayeen saldhig melletari oo uu ku leeyahay Syria markii uu sheegay in dowladda dalka Suuriya ay billowday duqeymo sun Kiimiko ah ay ugu rideyso goobaha Mucaaradku ku xoogganyahay kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 85 ruux.
Duqeymaha Diyaaradaha Mareykanka waxaa ku dhintay 7 qof, waxaana dadkaas ku jiray 4 Ubad ah – waxaana dunida oo dhami ay ku dhaliishay Donald Trump amarka uu ku bixiyay duqeymahaas oo aan heysan Ruqsad caalami ah ama aan la isla Oggolaan.
Dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Bariga dhexe ayaa horseeday Geeri iyo Burbur, waxaana xumaaday xiriirka dalalka qaar oo aad ugu kala duwan xaaladda Suuriya, Mareykanka iyo Russia ayaa hadda salka hoose ka taagan Arrimaha Syria.
Iyadoo ay jirto taasi weeraryahanka kooxda Juventus Dybala ayaa qaaday Olole ku fidaya Baraha Bulshada kaasoo uu ku codsanayo in Nabad laga dhigo Caalamka.
"JOOJI COLAADDA! Canug kasta waa keygii,” ayuu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Instagram, waxaa la socday Sawir uu xiranyahay Funaanad hoos gashi ah oo ay ku qorantahay #EveryChildIsMyChild.
Dybala fariintiisa ayaa durba noqotay mid aad u shacbiyad badan, waxaana jecleysatay in ka badan 400,000 oo isticmaalayaasha Instagram ka mid ah.